4 Istaraatiijiyad looga hortagayo Khatarta Fiditaanka Gujinaya Riix | Martech Zone
Xayeysiinta Dijitaalka ah waxay u badan tahay inuu noqdo midka ugu sarreeya ee xayeysiinta warbaahinta sannadka 2016 sida laga soo xigtay comScore. Taasi waxay sidoo kale ka dhigeysaa bartilmaameed aan la diidi karin oo loogu talagalay khayaanada gujinta. Xaqiiqdii, sida laga soo xigtay warbixin cusub oo ku saabsan khayaanada warshadaha xayeysiinta internetka, saddex meelood meel dhammaan kharashyada xayeysiinta ayaa lagu khasaarin doonaa khayaanada.
Shabakadaha Distil iyo Xafiiska Cinwaanka Isdhexgalka (IAB) waa sii daayay Tilmaamaha Daabacaha Dijitaalka ah ee Cabbirka iyo Yaraynta Bot Traffic, warbixin baaraysa dhibaatada maanta khiyaanada xayeysiiska dhijitaalka ah.
Raadinta Key ee Khayaanada
75% daabacayaasha iyo 59% xayeysiiyeyaashu ma awoodaan inay kala saaraan aadanaha iyo taraafikada dadka.
La dhejiyay Analytics (50%) iyo khayaanada hogaaminta iyo diiwaangelinta been abuurka ah (32%) ayaa sidoo kale muhiim u ah dhibaatooyinka taraafikada ee aan bina-aadamku ku ahayn dadka daabaca iyo kuwa wax xayeysiiya labadaba.
Guji iyo khayaanada aragtida ayaa ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay tabanayaan labada daabacade (86%) iyo xayeysiiyeyaasha (100%) markay tahay arrimaha taraafikada webka.
Warbixintu waa mid si qoto-dheer u qoto dheer waxayna ku dhex socotaa daabacayaasha iyo xayeysiiyaasha iyada oo loo marayo sida dhagxaanta gujintu u shaqeyso iyo sidoo kale istaraatiijiyado lagu yareynayo halista, oo ay ku jiraan
Performance - Diirad saarida tirooyinka ceyriinka ah iyo inbadan waxqabadyada muuqda Ku dar qiyaasta waxqabadka dhiirrigelinta ee hay'addaada si loo hubiyo natiijooyinka ganacsi ee tayada leh.
Iska Dhaaf Daawashada - Aragtida waxaa si fudud u been abuurtay bots iyo taraafikada kale ee aan dadka ahayn.
Tayada - Miisaaniyad tayo leh, oo aan tiro lahayn. U qoondee lacag ka fog boggaga dabada-dheer ee is-weydaarsiga xayeysiinta, halkaas oo khiyaamadu aad ugu badan tahay oo ka iibsato agabyada guud, goobaha caymiska.
Dalbashada daahfurnaan - Haddii wakaaladdaada ama alaab-qeybiyeyaasha alaabtu aysan ku tusin karin meesha xayeysiin kasta
aragti ayaa loo adeegsaday, ha isticmaalin.
Soo Degso Tilmaamaha Daabacayaasha Dijitaalka ah ee Cabbirka iyo Yaraynta Bot Traffic
Tags: khayaanada xayeysiintaUrurka Mareykanka ee Wakaaladaha XayeysiintaAnaUrurka Xayeysiiyaasha Qarankaguji khayaanadaShabakadaha DistilIABXafiiska Cinwaanka Isdhexgalkataraafikada aan dadka ahaynkhatartatagkooxda xisaabtanka lagu kalsoonaan karo
Erey bixinta Nooca Eraybixinta: Buuxinta Dabaasha iyo Gadzook Dhexdooda
Oktoobar 29, 2015 at 7:25 PM
Hi Douglas - maqaalku wuxuu daboolayaa ganaaxa mawduuca khiyaanada, laakiin ma bixinayo xal dhab ah, maadaama khayaanada gujintu aysan had iyo jeer ku dhicin taraafikada bot. Fikrad ayaa noqon doonta in si taxaddar leh looga taxadarayo goobaha la xiriira bartilmaameedka juquraafi ahaan (sida kuwa ka hooseeya + Fursadaha horumarsan). Sidoo kale, adoo adeegsanaya barnaamijyo gaar ah, sida http://www.xionagrup.ro waxay noqon laheyd ideea weyn, ama xitaa adeegsiga baarayaasha qorista si loo arko waxa IP-yada ama fasalada ay gujinayaan xayeysiimahaaga.